imfundo | eNanda Online
Tag Archives: imfundo
INanda Seminary, eyatholwa ngama- American Board of Missions (ABM) ngo 1968 athole ubuhlobo nomlando wase Nanda. Itholakala emabangeni anga- 25khilomitha enyakatho eThekwini, yaphenduka iSecondary yokuqala ekhetheleke amantombazane eSouthern Africa. Udumo lwakhula kakhulu futhi masinyane isikole sakhanga abafundi abaningi umhlaba wonke.
URev Daniel Lindley nonkosikazi wakhe uLucy, bafika eSouth Africa ngo 1835, njengoyedwa kumakhaphuli ayi-6 athunyelwa yi- ABM ukuqala imisebenzi emhlabeni. Wasebenza okokuqala endaweni okunamuhle ibizwa ngesifundazwe saseNyakatho neNtsonalanga, OLindleys bajoyina umgudu neshampeni yomndeni owavula isiteshi se- ABM eNatali. Ngo 1847 OLindleys bazihlanganisa bona eduze nomuzi weNkosi umQhawe eNanda indawo ukusebenza phakathi nabantu bakwaNgcobo abaxoshwa basatsiswa ngamaculo empi yeNkosi uDingane. Amanye amaZulu athutha aswhitsha izindawo baya eziqiwini lapho kululeka khona umfula uTugela River eNyakatho yoMzimkhulu River eNingizimu ngaphansi kosizo lukaHulumeni. UDaniel no Lucy Lindley nezingane ezi-11 bahamba baya eNanda Mission ngo 1958. Indlu yemishini isamile futhi manje isebenza njenge Seminary’s General Office, yakhiwa nguDaniel Lindley ngezintungo. Ngo 1869 bavula isikole sokulolonga amantombazane ukuba ngothisha futhi ‘ngamakhosikazi amahle’kubafana abasha bona ababelolongwa e- Adams Collage eManzimtoti. I- ABM yakhetha oPondo aba-50 kwiPhrojekthiyaseNanda Seminary eyavulwa njenge-Boarding School yamantombazane ayi-19 avunyelwa ekuqaleni. UMary Kelly Edwards, oneminyaka enga-40 ubudala, umfelokazi wase –Ohio, wabekwa njengothishanhloko eNanda Seminary,waqhubeka esikoleni waze washona eseneminyaka enga- 98.
History of Inanda Seminary
Abafundi besikole iNanda Newtown Comprehensive befundisa ngamasiko abo
La mavidiyo aqoshwe Enanda eNewtown Comprehensive High School njengengxenye yomsebenzi womphakathi oqhutsha uhlelo lwamasiko namagugu nokuvakasha enyuvesi yakwaZulu Natali. Abafundi abaningi bayingxenye yekilabhu yezokuvakasha, umbhanso wohlelo lwezokufunda kubafundi abazimisele kumagugu nezokuvakasha. Ukuqala amavidiyo aqoshelwa ukulungiselela inyanga yezokuvakasha nosuku lwamagugu ngoNcwaba noma uMandulo 2012. Abafundi babekukhathalele ukukhombisa amakhono nolwazi ngamasiko namagugu akwaZulu. Ukwenza okuningi akusikhona okwasesetegi noma okokuzikhumbuza, kodwa kuphelo ngokuqoshiwe. Kufake umfutho empilweni yabantu abasha nokuqonda kahle ngamasiko namagugu.
TRANSLATE: Learners talk about umemulo and virginity
Or listen to sound clips:
TRANSLATE: Learners from Inanda Newtown Comprehensive High School perform a dance
TRANSLATE: Learners from Inanda Newtown Comprehensive High School perform another dance